खुट्टा पोल्ने , सहनै नसक्ने गरि दुख्ने , पोल्ने , जोर्नी दुखेको जस्तो हुने । रगत मा युरिक एसिडको मात्रा 7.4 पुगेको रहेछ । शन्का लागेर युरिक एसिड चेक गरेको ।।के गर्ने होला अब ???कुन डाक्टरलाई देखाउने होला ?? | Hamro Doctor
खुट्टा पोल्ने , सहनै नसक्ने गरि दुख्ने , पोल्ने , जोर्नी दुखेको जस्तो हुने । रगत मा युरिक एसिडको मात्रा 7.4 पुगेको रहेछ । शन्का लागेर युरिक एसिड चेक गरेको ।।के गर्ने होला अब ???कुन डाक्टरलाई देखाउने होला ??
Rtr Philip kandel
on Mon, Jul 01 2019 06:35 PM
प्रश्नको लागि धन्यवाद । युरिक एसिड बढेको अवस्थामा केही औसधि र खानपिनमा ध्यान दिनपर्छ । एकपटक नजिकैको अस्पतालमा गएर हाडजोर्नी विशेषज्ञलाई भेटी औसधि र थप जानकारी लिनुहोला। हाम्रोडक्टर मार्फत अनलाइन परामर्शको निम्ति एकपटक यो लिन्कमा जानुहोला: https://www.hamrodoctor.com/service/orthopedic
on Wed, Jul 03 2019 12:48 PM